October 31, 2017 – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Wasaaradda Warfaafinta XFS oo Shir wadatashi ah ka furtay Muqdisho.
Muqdisho (FMN)—Shirkani wadatashiga ah oo u dhexeeya Wasaaradaha Warfaafinta Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Dawlad Goboleedyada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkani wuxuu socon doona muddo labo maalmood ah, iyadoo ay ka qeyb galayaan […]
Koox Dil Ka geysatay Degmada Hodan Oo Gacanta Lagu Soo Dhigay.
Muqdisho—FMN—Koox Bastoolado ku hubeysan ayaa maanta qof shacab ah ku dishay Xaafadda Tarabuunka ee ka tirsan Degmada Hodan ee Gobalka Banaadir sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka. Goob joogayaal ayaa sheegay in ay arkeen Wiil […]
Jig-jiga(FMN)—Shirweynihii wada tashiga ahaay ee u socday Xukummada Deegaanka Soomaalida Iyo Itoobiya iyo Waxgaradka Deegaanka oo shalay gelinkii danbe soo gabagaboobay ayaa lagasoo saaray bayaan dheer oo loogaga hadlayo Xaaladaha guud ee Deegaanku waqti xaadirkan […]
Raggii Geystay Qaraxii Udanbeeyay Ee Muqdisho Oo La Ogaaday Aqoonsiyada Ay Siteen.
Muqdisho(FMN)—Shan ka mid ah raggii hubaysnaa ee gudaha ugalay Huteel Naasa Habloo 2 ee dadka kor udhaafay 23 ku dilay,30 kalena dhaawacay ayaa lasoo ogaaday in ay siteen Aqoonsiyada(ID Cards)hay’adda Nabad-sugidda Qaran(NISA)ee Soomaaliya,taas oo u […]